News Archives - Baraawe NewsBaraawe News
Go to...Products reviewCustom 404Contact us
Baraawe News News-Art & Culture
Go to...HomeBaraaweSawirada Baraaweالقرآن الكريمKhutbado - محاضرات عامة - رسائل رمضانية للجالية البراوية - خطب الجمعة - حياة الصحابة - السيرة النبويةSteenziSportVideo and AudioContact Random Article
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya oo ka hadlay xaalada magaalada Baydhabo
Hoggaamiyayaasha dalalka Itoobiya iyo Eritrea oo booqanaya Muqdisho ee Somaliya
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Guddoomiyay Shirarka Tubaha Amniga Iyo Siyaasadda Loo Dhanyahay
Qarax goor dhaw ka dhacay xaafadda Kaawo Godey ee magaalada Muqdisho Somaaliya
Sidee ayuu Mukhtaar ROOBOW uga badbaaday qaraxii lala damacsanaa?
Wasiirka Amniga iyo Maamulka Gobolka oo ka wada hadlay xoojinta Nabadgelyada Muqdisho
Ciidamo talyaani ah oo Muqdisho Qarax Lagu la eegtay Maanta
Baarlamaanka Soomaaliya oo walaac ka muujiyay amniga Muqdisho iyo guud ahaan dalka Somaaliya
Gen Caanood oo beeniyay in uu hub iyo ciidan la goostay
Sedex qof oo ku dhimatay goob dhagaxa laga soo saaro oo ku taal Magaalada Kismaayo
Sedex qof oo ku dhimatay goob dhagaxa laga soo saaro
oo ku taal Magaalada Kismaayo
Gen. Caanood oo beeniyay
in uu hub iyo ciidan la goostay
oo walaac ka muujiyay amniga Muqdisho iyo guud ahaan dalka Somaaliya
Wasiirka Amniga iyo Maamulka Gobolka Banadir
oo ka wada hadlay xoojinta Nabadgelyada Muqdisho
Sidee ayuu Mukhtaar ROOBOW
uga badbaaday qaraxii lala damacsanaa?
Qarax goor dhaw ka dhacay xaafadda Kaawo Godey
ee magaalada Muqdisho Somaaliya
Hoggaamiyayaasha dalalka Itoobiya iyo Eritrea
oo booqanaya Muqdisho ee Somaliya
Dec 13, 2018	Leave a comment
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo aan codkiisa la maqal tan iyo intii ay soo ifbaxday xiisada siyaasadeed ka dhalatay mooshinka ayaa ku baaqay in la dajiyo xaalada magaalada Baydhabo.
Guddoomiyaha ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo odayaasha magaalada Baydhabo in ay ka fogaadaan wax kasta oo colaad horseedi kara, isaga oo ka digayy dagaal kale oo ka dhaca magaalada, leys kuna dayo in wax walba loo maro hab nabadeed iyo wada hadal.
‘’Waxaa ugu baaqayaa odayaasha iyo waxgaradka magaalada Baydhabo in ay xaalada dajiyaan, laga fogaado dagaal dhaca iyo dhiig danbe oo daadda, wixii maanta ka dhacay magaalada iyo qabashada Mukhtaar Rooboow waxaa lagala xisaabtamayaa ciddii arintaa ka danbeysay’’ ayuu yiri guddoomiye Mursal.
Dhinaca mar uu soo hadal qaaday arinta mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliy Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kala qeybsanaanta Baarlamaanka ayuu sheegay in wax walba lagu xalin doono Golaha dhaxdiisa.
‘’Xildhibaannada Golaha Shacabka waxaan is leeyhay waa dad doonaya in ay dhamaantood wax hagaajiyaan, ee ma’aha dad doonaya in ay wax qasaan, sidaa daraadeed wixii xal u baahan oo la xalin karo guud ahaan wey ka siman yihiin, marnaba uma arkayo in arin shaqo ku saabsan la siyaasadeeyo, waxaan leeyahay wax aan la xalin karin ma’aha’’ ayuu yiri guddoomiye Mursal.
Mar la weydiiyay in uu ka soo guuray xaruntii madaxtooyada oo uu deganaa iyo waxa ka jira in halkaa lagu go’doomiyay ayuu ku gaabsaday ‘’ Arrimahaasi waqtiggooda waa la soo dhaafay.. wax dhib ah oo hadda I hayaa ma jiro’’
Wuxuu meesha ka saaray in marnaba madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha ka wada hadleen xiisada siyaasadeed ee taagan.
Dec 11, 2018	Leave a comment
Booqashadii ugu horreeysay oo wadajir ah ayaa lagu wadaa inay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku tagaan hoggaamiyayaasha Itoobiya iyo Eritrea , sida laga soo xigtay ilo xogo-gaal ah oo ku dhow Villa Somalia.
Warar horu-dhac ayaa sheegay inay Arbacada berri ah soo gaari doonan Muqdisho, ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo hoggaamiyaha Eritrea,Isaias Afwerki , wararka ayaa inta ku daraya in booqashadan ay daba socoto kulammadii saddex geesoodka ahaa ee madaxda dalalkan ay yeelanayeen bilihii la soo dhaafay.
Hoggaamiyayaasha oo u ku jira madaxweynaha Soomaaliya ayaa horay ugu shiray Itoobiya iyo Eritrea ,iyadoo shirkii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada Gondor ee dalka Itoobiya lagu go’aamiyay in kan xiga lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Hoggaamiyayaasha saddexda dal ayaa kulammadii hore ka soo saaray inay ku heshiiyeen qodobbo ay ka mid yihiin iskaashi dhaqaale, siyaasadeed, dhaqan iyo amni.
Dowladda Soomaaliya ilaa hadda kama hadlin booqashada la filayo inay hoggaamiyayaasha ku soo gaaray caasimadda Muqdisho.
Balse, booqashada hoggaamiyayaasha dalalka Itoobiya iyo Eritrea ee magaalada Muqdisho ayaa ku aadday xilli madaxweynaha Soomaaliya uu wajahayo culeys uga imaanaya Xildhibaannada Baarlamaanka, kuwaas oo qaarkood ka gudbiyay mooshin ay ku doonayaan in xilka looga qaado, wallow xoghayaha guud ee Baarlamaanka uu maanta baahiyay inuu burey mooshinka.
Dec 10, 2018	Leave a comment
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda fedraalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, ayaa maanta guddoomiyay shirarka toddobaadlaha ah ee Tubta Amniga iyo Caddaalada iyo Tubta siyaasada loo dhanyahay.
Maamulka gobalka Banaadir, Taliska Booliiska iyo wasaaradda amniga gudaha oo qayb ka ah tubta amniga iyo cadaaladda ayaa shirka tubta amniga iyo caddaaladda kusoo bandhigay siyaasadda dawladda ee la dagaalanka mukhaadaraadka oo aad looga dooday intii kulanku uu socday.
Siyaasaddaan oo loo qorsheeyay in lagu xakameeyo dhibaatada uu mukhaadaraadka ku hayo bulshada Soomaaliyeed ayaa tubta amniga iyo caddaaladda loogu soo bandhigay si horumarin loogu sameeyo kadibna loogu gudbiyo golaha wasiirrada, ugu dambaynna looga soo saaro sharci saldhig u noqda hannaanka xakamaynta mukhaadaraadka.
Ra’iisul wasaare Khayre ayaa sidoo kale guddoomiyay shirka siyaasadda loo dhanyahay oo maanta looga hadlay astaynta awoodaha heerarka dawladda, samaynta siyaasadda horumarinta iyo tababarrada dawladaha hoose, dib-u-eegista sharciga dawladaha hoose iyo hindise sharciyadeedka xiriirka heerarka dawladaha.
Shirarka Tubaha ee toddobaadlaha ah ayaa diiradda lagu saaraa Hal-beegyada iyo qaybaha shaqo ee hor-tebinta u leh dhammaan hay’adaha iyo wasaaraha qaybta ka tubaha.
Nov 26, 2018	Leave a comment
Qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay xaafadda Kaawo Godey degmaada Wadajir ee magaalada Muqdisho
Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay goob Suuq Qaadka lagu iibiyo ah, islamarkaana laga raro gaadiidka oo ay xiligaa ku sunaayeen dadweyne aad u faro badan.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in gaari wadada la dhigay uu qarxay abaarihii duhurkii, waxaana laga cabsi qabaa in khasaare kala duwan uu dhaliyay.
Wararka ayaa intaa ku daraya in gaadiidka gurmadka degdega ay goobta gaareen, sidoo kale waxaa goobta qaraxa ka dhacay tagay ciidamo ka tirsan kuwa Amniga.
Si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay qaraxa oo ahaa mid si xooggan looga maqlay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Qaraxan ayaa imanaya xili magaalada Gaalkacyo subaxnimadii hore ee saakay ay ka dhaceen Qaraxyo culus oo ay ku dhinteen dad ka badan 20 ruux.
Oct 14, 2018	Leave a comment
Baydhabo (BaravaNews) – Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyadii mataanaha ahaa ee casar liiqii shalay galab ka dhacay bartamaha magaalada Baydhaba ee xarunta gobolk Baay, halkaasi oo olole doorasho ay ka socdaan.
Qaraxyada oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 17 qof, ayada oo 50 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay badankood ayaa ah dad shacab ah, oo ku sugnaa goobihii la qarxiyey.
Xog gaar ah oo ay heshay Caasimada Online ayaa sheegeysa in mid ka mid ah qaraxyada oo ka dhacay maqaayadda Badar loola dan lahaa Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Roobow ayaa degan hotelka Guuraaw ama Bayern Munich ee Baydhaba, waxaana hotel uu aad ugu dhow-yahay maqaayadda qaraxa uu ka dhacay. Ammaanka hotelka iyo meelaha ku dhow ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la sheegay in qofka is-qarxiyey ay joojiyeen ciidamo inta uusan gaarin hotelka kadibna is-qarxiyey.
Roobow oo horey uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa markii uu is-sharxay waxa ay Al-Shabaab ku tilmaameen inuu yahay “murtad diinta ka baxay”
Kooxda Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxyada waxay tiri in hotelka Bilan uu leeyahay wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti, waxaana macquul ah in labada weerar lagu kala beegsanayey Roobow iyo Fargeeti.
Oct 5, 2018	Leave a comment
Wasiirka Amniga ee Xukuumadda Soomaaliya iyo madaxda Maamulka Gobolka Banaadir ayaa maanta kulan la qaatay Guddoomiyeyaasha 17-ka degmo ee Gobolka, Taliyeyaasha ciidanka booliska iyo Guddiga abaabulka wacyigelinta Qaran, kaasi oo looga hadlay xoojinta amniga caasimadda.
Kulanka ayaa intii uu socday waxaa goobta lagu soo bandhigay 3,000 saddex kun oo askari, kuwaasi oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan Nabadgelyada Degmooyinka, isla markaana lagu soo kordhiyay Degmooyinka, si ay u xaqiijiyaan amniga caasimadda.
Guddoomiye Ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay in wadashaqeyn la’aanta ay tahay tan ugu badan ee dhibaatada ka soo gaarto shacabka, isla markaana aan loo dulqaadan doonin in markale ay dhacdo wada shaqeyn la’aan dhex marta Maamulada degmooyinka iyo taliyeesha saldhigyada booliska.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng, Yariisow) ayaa kula dar daarmay Guddoomiyeyaasha Degmooyinka iyo taliyeyaasha saldhigyada booliska inay xoojiyaan la shaqeynta Guddoomiyeyaasha Waaxyaha ilaa iyo heer tabeelle ee Degmooyinka, si loo xaqiijiyo amniga caasimadda.
Wasiirka Amniga ee Xumuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Isloow Ducaale ayaa sheegay in mas’uul kasto lagula xisaabta tami doona shaqadiisa ee dhanka ammaanka magaalada, isla markaana aan cidna lagala gorgortami doonin sugidda Nabadgelyada.
Oct 1, 2018	Leave a comment
Sep 17, 2018	Leave a comment
Golaha wakiilada Soomaaliya oo maanta yeeshay kulanka labaad ee kalfadhiga afaraad ayaa dood kulul ka yeeshay xaaladda amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan tan dalka.
Kulanka oo ay ka goob-joog ahaayeen 168-Xildhibaan waxa shir guddoominayay guddoomiyaha Golaha Shacabka ,Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo ay hareer fadhiyeen guddoomiye ku-xigeennada koowaad iyo labaad.
Sidoo kale, waxaa kulanka ku sugnaa wasiirka amniga qaranka ,Maxamed Abuukar Islow oo gudanayay waajibaadkiisa xildhibaanimo, waxaana dhagihiisa ku dhacayay eedeymaha ay xildhibaannada u jeediyeen xukuumadda.
Hadalka jeedinta xildhibaannada ayaa inta badan waxaa ay ku soo bandhigeen sida aysan ugu kalsooneyn amniga Muqdisho,iyagoo xata sheegay inay ka cabsadaan ciidammada amniga.
“Amniga dalka faraha ayuu ka baxay, ra’iisul wasaaraha waxa uu ka dhammaan la’yahay handadaad uu ku hayo madaxda maamul gobolleedyada waana ku hungownay kalsoonidii aan siinay, Dawladda waxa ay ku soo aruurtay wax qabadkeedu Facebook iyo Twiter. Fadlan Raysalwasaare is casil waad fashilantay, handadaad dad laguna xukumo.” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Ganey.
Guddoomiyaha Baarlamaanka,Maxamed Mursal ayaa markii ay dhammaatey dooda xildhibaannada, wuxuu sheegay in kulanka berri lugu sii amba-qaadayo ka doodista amniga ,marka oo ay hadal jeedin doonan xildhibaannada aan maanta qeybta ka ahayn hadal jeedinta.
Aug 19, 2018	Leave a comment
Abaanduulihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jen Cabdullaahi Cali Caanood oo uu dhawaan madaxweyne Farmaajo xilkii ka qaaday ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar soo baxay oo sheegaya in uu la goostay gadiid dagaal iyo ciidan.
Wuxuu sheegay in hadda isaga iyo ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed howlgal ka wadaan qeybo ka mid ah gobolka Shabeelllaha dhexe, gaar ahaan wuxuu intaa ku daray in dagaal uu ku dhaxmaray ciidamada uu hogaaminayo iyo Al-shabaab degmada Marka ee xarunta u ah gobolka Shabeellaha Hoose.
Mar wax laga weydiiyay wax ka jira in uu ka carooday xil ka qaadistii uu dhawaan ku sameeyay madaxweyne Farmaajo ayuu yiri ‘’ “waxaasi waxba kama jiraan, waa wixii Soomaali ku hoogtay oo ku ba’day, ilaahna naguma jirrabo”, hadalkaas oo uu ula jeeday inuusan diyaar u ahayn dagaal jabhadayn ah.
Jen Caanood ayaa intaa ku daray in uu xilka ku wareejin doonto taliyaha cusub marka uu soo dhamaado howlgalka uu hadda u joogo gobolka Shabeellaha hoose.
Warka ku saabsan in Abaanduuluhu la goostay gadiid dagaal iyo ciidamo ayaa soo baxay kadib markii laga war-helay in isago ku dhawaad 40 gadiidka dagaalka ah oo Al-shabaab ay jidgooyo u dhigteen deegaan aan wax badan ka fogeyn degmada Shalanbood ee gobolka Shabeellaha dhexe.
Aug 12, 2018	Leave a comment
Goobtan oo loo yaqaan Dhagax-jabinta, dhanka waqooyina kaga beegan Kismaayo ayaa waxaa maanta ku dhintay ilaa sedex kamid ah shaqaale halkaasi dhagax ka soo saarayay kadib markii ay kusoo duntay buur dhagax ah.
Buurahan laga qodo dhagaxa loo isticmaalo dhisamayaasha magaalada Kismaayo ayaa marka aad booqato waxaad arkeeysaa buuro waaweyn oo ay hoos ka qodeen shaqaale dhagax kala soo baxaya, kuwaasoo aad dareemeeyso qatar in ay ku shaqeeyaan.
Masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa gaaray goobta, waxaana soconaya dadaallo lagu soo saarayo dadka ay buurtu kusoo duntay.
Qaar kamid ah shaqaalaha oo ay warbaahintu weeydiisay waxa ku kalifaya in qatartan ay ku shaqeeyaan ayay sheegeen in ay ka biishaan qoysaskooda, islamarkaana aysan heysan shaqo tan u dhaanta, ayagoo xusay in la heli karo qalab casri ah oo dhagaxa lagu soo saaro balse aysan awoodin.
Horaantii bishii Jannaayo ee sanaddii 2014 ayay ahayd markii buur laga qodo carro Kaawada oo aah ka fogeyn halka uu shilku ka dhacay ay kusoo duntay shaqaale ka shaqeynayay, halkaa oo ay ku dhinteen ilaa 7 qof.
Wararka Maanta ee BBC Somali
Patrice Evra oo ka walaacsan 'xadgudubkii cunsurinimada' ee lagu sameeyay Raheem Sterling Dec 10, 2018
Daaficii hore ee kooxda Manchester United Patrice Evra ayaa wax layaab leh ku tilmaamay tacaddi cunsurinimo ah oo la sheegay in dhawaan loo geystay weeraryahanka Manchester City Raheem Sterling
Luka Modric oo ku guulaystay abaalmarinta kubbada cagta ee Ballon d'Or Dec 4, 2018
Luka Modric oo khadka dhexe uga dheela kooxda Real Madrid iyo qarankiisa Croatia ayaa ku guulaystay abaalmarinta qaaliga ah ee kubbadda ee Ballon d'Or 2018.
Tababaraha Arsenal Unai Emery oo lagu ammaanay in uusan ka cabsan ciyaartoyda Nov 27, 2018
Tababaraha Arsenal Unai Emery ayaa lagu ammaanay in uusan ka cabsanin in uu kursiga kaydka galiyo ciyaartoydiisa.
Riix Sawirkan ka akhriso taariikhda shuyuukhda
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya oo ka hadlay xaalada magaalada Baydhabo Dec 13, 2018
Hoggaamiyayaasha dalalka Itoobiya iyo Eritrea oo booqanaya Muqdisho ee Somaliya Dec 11, 2018
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Guddoomiyay Shirarka Tubaha Amniga Iyo Siyaasadda Loo Dhanyahay Dec 10, 2018